အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဇွန်လ ၁ ရက်မှာ အင်ဒို-ပစိဖိတ်မဟာဗျူဟာ အစီရင်ခံစာ (IPSR) ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ အစီရင် ခံစာရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က တရုတ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်သွား ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာ အချက်နှစ်ချက်ကို အလေးပေးဖော်ပြထားတယ်။ အမေရိကန်ဟာဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို အကာအကွယ်ပေးမယ်။ ဒီကိစ္စကို လုပ်နိုင်တဲ့နည်း လမ်းရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။ အမေရိကန်ဟာ အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသတွင်း အစီရင်ခံစာကို တရားဝင်ထုတ်ပြန်မှုအလွန်နည်းပါး တယ်။ ယခုနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာဟာ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်ပင်တဂွန်က ထုတ်ြ...
IN: Political BY: သီဟ 17 Jun, 2019
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၁၆ ဥပဒေကျူး လွန်သူဝရမ်းပြေးဖြစ်နေလျှင် ဆရာတော်ဟု မခေါ်ထိုက်ကြောင်း သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။ ဇွန် ၁၆ ရက် သာသနာရေး နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာနှင့် website တွင်အများပြည်သူ သိရှိစေရန်ရှင်း လင်းဖော်ပြချက်အနေဖြင့် သာသ နာတော်ကို အလေးမထားသူ၊ ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကို မစောင့်ထိန်းသူ သည်သင်္ကန်းဝတ်သာဖြစ်၍ ရာဇဝတ်ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ထိုက်သူ၊ အာဏာစက်ဖြင့်အရေးယူခံရသူ၊ ဥပဒေကျူးလွန်သူဝရမ်းပြေး ဖြစ်နေလျှင် မည်သို့မျှ ဆရာတော်ဟု မခေါ်ဆိုထိုက်ကြောင်း ထုတ်...
IN: Political BY: NT 17 Jun, 2019
IN: Life BY: ZZ 17 Jun, 2019
မင်းတပ်မြို့၌ တည်ဆောက်နေသည့် ဝဥအခြောက်ခံစက်ရုံ အောက်တိုဘာလတွင် စတင်လည်ပတ်မည်
IN: Regional BY: MOS 17 Jun, 2019
ချင်းပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဆက်သွယ်နိုင်မည့် ဟားခါး - မှန်တော- ကလေးလမ်း ၂ဝ၂ဝ ခုနှစ်တွင် အပြီးဖောက်လုပ်မည်
အိန္ဒိယ-မြန်မာ တပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းပြီး နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်မှ သူပုန်များကို ဖယ်ရှား
IN: Political BY: HWA, One News Myanmar) 17 Jun, 2019
ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ တွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက်ရန် ပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုလည်း ဖိတ်ကြားထား ဟုဆို
ငြိမ်းချမ်းရေးဖိုရမ် နေပြည်တော်၌ ကျင်းပ
အမျိုးသားရေးဝါဒသည် လူမျိုးစွဲဝါဒဘက် ရောက်သွားပါက ဒီမိုကရေစီသွားရာလမ်းကို အဟန့်အတားဖြစ်စေမည်
ရခိုင်မျိုးချစ် ပါတီဝင်များအားလုံး ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သို့ ဝင်မည်
မင်းတပ်၊ ဇွန် ၁၆ ချင်းပြည် နယ်တောင်ပိုင်း မင်းတပ်မြို့ ထင် ချောင်းကျေးရွာအနီးတွင် ဝဥစိုက် တောင်သူများ စုပေါင်းတည်ဆောက် နေသည့် ဝဥအခြောက်ခံစက်ရုံမှာ လာမည့် ဝဥပေါ်ချိန် အောက်တို ဘာလတွင် စက်ရုံစတင်လည်ပတ် ...
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မွေးနေ့တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ရှိ (၃၈) လမ်းသစ်ကို အောင်ဆန်းစုကြည်လမ်းဟု အမည်ပေးမည်
တာချီလိတ်၌ မူးယစ်မှု၊ လူသတ်မှုတို့ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ အလိုရှိနေသည့် တရားခံပြေးတစ်ဦးကို ထိုင်းနိုင်ငံ တာဝန်ရှိသူများထံသို့ လွှဲပြောင်းပေး
တာချီလိတ်နှင့် ကျိုင်းတုံ၌ စိတ်ကြွဆေးပြားများနှင့်အတူ ထိုင်းနိုင်ငံသားတစ်ဦးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ဦးတို့ကို ဖမ်းဆီးရမိ
စစ်တွေမြို့မ ရဲစခန်း လုံခြုံရေးအတွက် အုတ်တံတိုင်းခတ်ရန် ဘေးပတ်လည်ဆိုင်ခန်း ၇ဝ ကျော်ကို ဖျက်
IN: Business BY: GC 17 Jun, 2019
IN: Business BY: TEEP 17 Jun, 2019
ဂျပန်မက်ဆီဟု ခေါ်ဆိုခံရခြင်းအတွက် ဂုဏ်ယူမိကြောင်း ကူဘို ဖွင့်ဟ
ရီးရဲလ်ကစားသမားသစ် ကူဘိုက မိမိကို ဂျပန်မက်ဆီဟု ခေါ် ဆိုနေကြခြင်းအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်း မြောက်မိသော်လည်း မက်ဆီ၏အဆင့်သို့ရောက်ရန် များစွာကြိုးစား ရဦးမည်ဖြစ်ြေ...
IN: Sport BY: KKW 17 Jun, 2019
တာထွက် မကောင်းခဲ့သော်လည်း စိတ်ဓာတ်ကျရန် မလိုဟု မက်ဆီ တိုက်တွန်း
ချီလီကို လျှော့တွက်မထားရန် ပြိုင်ဘက်များအား ဗီဒဲလ် သတိပေး
မြန်မာ MMA ကစားသမားဖိုးသော် အင်ဒိုနီးရှား ကစားသမားကို ပထမအချီတွင် ဒိုင်ပွဲရပ်ဖြင့် အနိုင်ရ
ဖီအိုရင်တီးနား နည်းပြအဖြစ် မွန်တဲလား ဆက်ရှိမည်
အားကစား ဒါရိုက်တာအဖြစ် ပီအက်စ်ဂျီသို့ လီယိုနာဒို တစ်ကျော့ပြန်ရောက်လာ
IN: World News BY: M Bwe 17 Jun, 2019
တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ မွန်ဂျေးအင် ဆွီဒင်ပါလီမန်တွင် နျူကလီးယားဖျက်သိမ်းရေး ငြိမ်းချမ်းရေး သံတမန်ရေးရာများကို မိန့်ခွန်းပြောကြားမည်
ရေနံတင် သင်္ဘောများကို အီရန်က တိုက်ခိုက်ခဲ့ပုံ ဗီဒီယို ထွက်ပေါ်
ပိုလန်သို့ တပ်သား ၁ဝဝဝ စေလွှတ်မည်ဟု အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ပြော
ထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့တွင် ဒီမိုကရက်တို့ပါဝင်ရန် ပရာယွတ်ခွင့်ပြု
မက္ကဆီကို သမ္မတစီးနင်းသည့် လေယာဉ်များကိုရောင်းချပြီး နယ်မြေရွှေ့ပြောင်းသူများ အစီအစဉ်အတွက် ထောက်ပံ့မည်
IN: Entertainment BY: ၀ိုင်နေ 17 Jun, 2019
IN: Entertainment BY: KZYH 17 Jun, 2019
''အန်ကယ် (မြန်မာပြည်သိန်းတန်) မပါတော့ဘူးဆိုတော့ အန်ကယ့်ကို လွမ်းနေပါတယ်'' တင်ဇာမော်
အိုက်စိုင်း နှစ်ပေါင်း ၇ဝ ကျော် ဖြစ်ပွားလာခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခသည် ယနေ့ထ...
IN: Articles BY: အိုက်စိုင်း 06 Jun, 2019
မုံရွာ ၊ ဇွန် ၁၆ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး မုံရွာမြို့ရပ်ကွက်အသီးသီးမှ နေထိုင်စရာမရှိသည့် အသက် (၆၅) ...
IN: Life BY: KTS 17 Jun, 2019
မကွေး၊ ဇွန် ၁၆ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဒေသခံပန်းချီဆရာ ၁၆ ဦးမှရေး ဆွဲထားသည့် မြေလတ်ဒေသပုံရိပ် ရှုခင်းပန်း...
လန်ဒန်၊ ဇွန် ၁၆ ပြီးခဲ့သည့် ဇွန် ၁၃ ရက်တွင် ဂရင်းလန်ကျွန်းမှ ရေခဲပြင်၏ ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖြစ်သည့်...
IN: Life BY: M Bwe 17 Jun, 2019
မန္တလေး၊ ဇွန် ၁၅ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး ချမ်းမြသာစည်မြို့ နယ်ရှိ မဟာမုနိ ရုပ်ရှင်တော်မြတ် တွင် ဇွန် ၁...
IN: Life BY: MTK 16 Jun, 2019
မန္တလေး၊ ဇွန် ၁၅ မန္တလေးခရိုင် မန္တလေး မြို့အတွင်းရှိ မြို့နယ်ခြောက်မြို့နယ်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပိုမ...
IN: Life BY: KSA 16 Jun, 2019
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၁၅ ၂ဝ၁၉ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများ ကို တက္ကသိုလ် ၂၃ ခုမှ လက်ခံဆောင်ရွက...
IN: Life BY: ATK 16 Jun, 2019
IN: Others BY: DW 17 Jun, 2019
IN: Others BY: KKTM(MWD) 17 Jun, 2019
လူသေဆုံးမှုကြောင့် ရန်ကုန်တွင် ပတူအုံများကို စတင်ရှင်းလင်းလျက်ရှိရာ ယခုလအတွင်း ကိုးကြိမ်အထိရှိလာ
IN: Others BY: WYHW 17 Jun, 2019
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ(ငြိမ်း) သမက်ဖြစ်သူ၏ အသုဘလိုက်ပါပို့ဆောင်၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဝမ်းနည်းကြောင်း ကိုယ်ရေးစာပေးပို့
မဟာသန္တိသုခကျောင်း ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဥပဒေနှင့်အညီ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးရန် လန်ဒန်ဆရာတော်တောင်းဆို
ရထားလမ်းကို ကားလမ်းဖြတ်သည့်နေရာများ၌ မတော်တဆဖြစ်ပွားမှု ပြန်လည်များပြားလာ
အမှုအာမခံအတွက် လာဘ်ယူခဲ့သည့် ရဲအုပ်နှင့် ဒုရဲအုပ်တို့ကို အဂတိဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်
တောင်ဒဂုံ ဘာသာရေး အကြောင်းပြုဆူပူမှု ဦးဆောင်သူ မိုက်ကယ်ကျော်မြင့် အမှု ဇွန် ၂၁ စစ်မည်